Madaxweyne Trump oo ku Hambalyeeyay Erdogan Guushii Aftida
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhiggiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ugu hanbalyeeyay guushii uu ka gaadhay aftidii Axaddii, taasi oo siinaysa awoodo cusub.
Madaxwayne Trump oo khadka taleefoonka kula hadlay Erdogan ayaa wuxuu sidoo kale uga mahad celiyay taageeradii ay turkiga taageereen weerarkii gantaalada ee ay Mareykanka ku qaadeen saldhigyo ay dawlada Suuriya leedahay .
Bayaan ka soo baxay Aqalka Cad Isniintii, ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu kala hadlay dhigiisa Turkiga talaabadii ay Maraykanka uga jawaabeen hubkii kimikada ahaa ee la sheegay in ay isticmaashay xukuuumada Suuriya 4 Abriil.
Bayaanka ayaa lagu yidhi ” labada hogaamiye waxa ay isku raaceen muhimada ay leedahay in lala xisaabtamo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad “.
Labada madaxweyne ayaa sidoo kale waxay ka wadahadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxda isugu yeedha Dawladda Islaamka.
Erdogan ayaa beeniyay canbarayn uga timid kormeerayaasha caalamiga ah oo sheegay in uu ololaha aftida ku galay dhaqaalaha dowlada islamarkana qolyaha ka soo horjeeday isbadalka aysan helin fursad midaasi la mid ah .
Kormeereyaasha aftidana wuxuu ugu jawaabay “Shaqadiina waa in aad garataan,”.
Gudiga doorashada ayaa mid sax ah ku tilmaamay guushii dirqiga ahayd ee uu gaadhay Erdogan, inkastoo ay jireen eedeeymo wax isdaba marin ah oo ay soo jeedinayeen mucaaradka.
Dhanka kale, xukuumadda Turkiga ayaa kordhisay waqtiga xaaladda degdega ah ee dalkaasi saaran. Xaalada degdega ah ayaa la soo saaray ka dib afgambigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii Julay ee sanadii hore.